AMISOM oo cambaareeysay weerarkii Al-Shabaab ee Masaajid ku yaala X/Jajab ee Muqdisho. - Warka gudaha Somaliya - Local News in Somalia
Home WARKA GUDAHA AMISOM oo cambaareeysay weerarkii Al-Shabaab ee Masaajid ku yaala X/Jajab ee Muqdisho.
AMISOM oo cambaareeysay weerarkii Al-Shabaab ee Masaajid ku yaala X/Jajab ee Muqdisho.
Muqdisho – Wakiilka Gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Ambassador Caetano Madeira, ayaa si adag u dhalleeceeyay weeraradii naxdinta lahaa ee dhawaan ka dhacay Masjid ku yaal degmada Xamar Jajab, oo ay ku dhinteen hal qof.
Askariga al-Shabaab ayaa weeraray dadkii dukanaayay Sabtidii hore, intii lagu jiray Salaada Maqrib oo uu ku toogtay qof ka hor intii aanu ka baxsan qorigiisa.
“Anigu waxaan ka naxay falalkan qafilan,” ayuu yiri Ambassador Madeira. “Weerarku wuxuu caddeeyay in Al-Shabaab aysan ixtiraamaynin diinta Islaamka, oo ay waxbarashadoodu ay ka xishoodaan dhiigga aan waxba galabsan, ama goobaha cibaadada ee cibaadada”.
Madaxa AMISOM, ayaa sidoo kale cambaareeyay rabshadaha dilalka iyo afduubyada carruurta yaryar by kooxda argagixisada. In kasta oo ay dhaleecaynayaan falalka xun ee fulaynimada ah ee lagu soo booqday kooxaha nugul ee dalka, Ambassador Madeira ayaa sheegay in dilalka lala beegsanayo carruurta iyo dhallinyarada difaaci la’aanta ah, ay heystaan ​​dhammaan waxyaabaha ay ka mid yihiin kooxda argagixisada.
“Waxay ku dhaadhaceen meesha ugu hooseysa. Waa ay niyad jabayaan waxayna raadinayaan inay sameeyaan fariimo ay ka mid yihiin ficiladaas oo kale, “ayuu yiri Madeira.
Waxa uu walaac ka muujiyay kororka baabuur-garaacista dhalinyarada aan waxba galabsan. “Soomaaliya waxa ay lumisay qaar ka mid ah dadka ugu badan ee awoodda leh iyada oo loo marayo dilalkan” ayuu yiri.
Inkasta oo uu ku booriyay qoysaska meydka ah, wuxuu ku celiyay sida ay AMISOM uga go’an tahay inay la shaqeyso ciidamada ammaanka ee Soomaaliya iyo lammaanayaal kale, si loo dhammeeyo dilalka aan kala sooc lahayn; iyo weerarrada rabshadaha ee masaajidda, hoteelada iyo meelaha kale ee bulshada.